Kpọtụrụ anyị - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » Kpọtụrụ Anyị
Orieslọ ọrụ ụlọ ọrụ Redio FMUSER na Guangzhou
USlọ ọrụ FMUSER Guangzhou dị na Tianhe District nke bụ etiti Canton. Ọ dị nso na Canton Fair, ọdụ ụgbọ oloko guangzhou, okporo ụzọ xiaobei na dashatou, ọ dị naanị nkeji iri ma ọ bụrụ na ị ga - ewere TAXI. Nabata ndi enyi n’uwa nile ileta na ime nkata.
Adreesị: No.305 Ime ụlọ HuiLan No.273 Huanpu okporo ụzọ TianHe District Guangzhou China Zip: 510620
FMUSER International Group Inc. bụ ihe eji emepụta igwe ọgbara ọhụrụ, nke rụpụtara n’imepụta ihe, injinịa, n’ichepụta ihe na n’ịzụkọ nke ndị na - ebugharị FM na ngwa ndị ọzọ metụtara ya. Anyị bụ otu n'ime ndị kacha enye ndị na-ebugharị ebugharị na China.
Site na ahụmịhe afọ 6 na ngalaba nke fm transcript, anyị nwetara nnukwu aha na ngwaahịa anyị dị elu na ezigbo ọrụ. Anyị na-enye ọrụ ndị ọrụ ndụmọdụ na azụmaahịa yana ọrụ ire. Azụmaahịa anyị ruru obodo na mpaghara dị otu narị n'ụwa niile dịka United States, United Kingdom, Germany, France, Japan, Spain, Sweden, Europe, Middle East, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị emeela ọtụtụ iwu OEM maka ndị ahịa anyị.
Ngwaahịa anyị kachasị gụnyere 0.1w na-ebufe, onye na-ebugharị 0.5w, onye na-ebugharị 1w, onye na-ebugharị 5w, onye na-ebugharị 7w, onye na-ebugharị 10w, onye na-ebugharị 15w, onye na-ebugharị 30w, 30w amplifier, Onye na-ebugharị 1 ~ 1000w. E wezụga nke a, anyị nwere ngwa ndị na-ebugharị ebugharị dị ka antenna GP, ihe ịnye ọkụ, eriri igwe na eriri anọdụna RG58. Nke a na-eso bụ foto ngosipụta nke ngwaahịa anyị mbụ:
Enwere ike iji ndị na - ebugharị ya n'ọtụtụ mpaghara na ubi, dị ka ama egwuregwu, ogige, super makets na ihe ndị ọzọ. Foto na-esonụ na-egosi ụfọdụ ngwa nke ndị na - ebugharị fm anyị, na ngwa ọrụ ọkachamara anyị
Ebumnuche anyị abụghị naanị ịnye ngwaahịa dị elu, kamakwa ọrụ nyocha ọrụ ọkachamara. Ihe ọ bụla echiche ịgbasa ozi n’uche, anyị ga-eso gị rụọ ọrụ ngwa ngwa ịchọta ngwaahịa ziri ezi maka ọrụ gị. Yabụ ọ bụrụ n’inwe echiche ọ bụla nke iji transiti, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enyere gị aka ịchọpụta ihe zuru oke ozugbo enwere ike.
Kedu ka ị ga - esi akwụ ụgwọ iji zụta ihe ahụ?
Peeji nke ọ bụla na ndepụta ndepụta ihe anyị dị na weebụsaịtị anyị nwere PayPal logo ịkwụ ụgwọ.
1. Akaụntụ PayPal anyị: kitmanlaw@gmail.com
2. Jiri ego akwụ ụgwọ:
Aha zuru oke: Quan Li
Aha mbụ / aha enyere: QUAN
Aha ikpeazụ / Aha nna: LI
3. bykwụ ụgwọ site Western Union:
4.Paykwụ ụgwọ site na T / T:
Akaụntụ Mba: 127 854982 833
Aha Onye Uru: LI QUAN
Aha Bank: THEB HR H HB ANDR AND SHB SHR SH SHB SHR SH SHBỌCH SH
Adreesị Bank: 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG
Koodu swift: HSBCHKHHHKH
Koodu Bank: 004
** Ọ bụrụ na ị nyefee ego na akaụntụ akụ anyị na Hongkong na Shanghai Banking Corporation (HSBC), ị nwere ike ịhapụ ozi na mpaghara nchedo enweghị mmachi na ọdịnaya.
Kedụ ka anyị si ebugharị gị ihe ndị ahụ?
* A ga-ezipụ edemede n'ime ụbọchị ọrụ 1-3 na oge ịkwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ.
* Anyị ga-eziga ya na adreesị PayPal gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe adreesị, biko gbanwee ya tupu ịkwụ ụgwọ. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a tupu mbupu.
* Ọ bụrụ na ngwugwu ndị a dị n'okpuru 0.5kg, a ga-ebugharị anyị site na ozi ikuku; Ọ ga-ewe ihe dịka 15-25 ụbọchị n’aka gị. Ọ bụrụ na ngwugwu ahụ dị ihe dị ka 1 ~ 3kg, anyị ga-ebugharị site na EMS, ọ ga-ewe ihe dịka 7 ~ 15 ụbọchị n'aka gị. Ọ bụrụ na ngwugwu karịrị 3kg, anyị ga-eziga site na DHL. Ọ ga-ewe ihe dị ka 3 ~ 7 ụbọchị n'aka gị. Nchịkọta ndị a niile sitere na China Guangzhou.
* A ga-eziga ngwugwu ka ọ bụrụ “onyinye” wee belata obere ka o kwere omume, onye zụrụ ahịa achọghị ịkwụ ụgwọ maka “TAX”
* Anyị bichaa ụgbọ mmiri, anyị ga-ezitere gị ozi E-mail ma kọọrọ gị ọnụ ọgụgụ nsuso.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị na: kitmanlaw@gmail.com
Ma ọ bụ jiri mpempe kọntaktị a:
Zitere anyị ajụjụ gị, azịza ma ọ bụ ajụjụ a na-anabatakwa.
*(na-egosi ubi chọrọ)
Adreesị ozi ịntanetị: *
Adreesị E-mail ọzọ: *
Biko tinye Adreesị E-mail gị nke ugboro abụọ.
Ọnọdụ ịkwụ ụgwọ a kwụrụ ụgwọ
họrọ ase Ohaneze Kpọtụrụ nzaghachi Comments
Koodu CAPTCHA: *